Oniversiten’i Mahajanga – Naato ny fampianarana : nifandona ny samy mpianatra, dimy naratra, dimy hafa voasambotra | NewsMada
Oniversiten’i Mahajanga – Naato ny fampianarana : nifandona ny samy mpianatra, dimy naratra, dimy hafa voasambotra
Afakomaly, ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana (Emmo/Reg) no nifandona, tao amin’ny oniversiten’i Mahajanga. Omaly kosa, ny samy mpianatra indray no nifandramatra. Nahery vaika ny fifandonana, satria nisy mpianatra dimy no naratra mafy, nisy ny vaky loha… Mpianatra dimy no vosambotra.
Nakatona ary natsahatra mihitsy ny fampianarana ao amin’ny oniversiten’Ambondrona any Mahajanga, nanomboka omaly. Tsy nakatona noho ny pesta anefa fa nakatona noho ny hetsiky ny mpianatra. Nitrangana fifandonana mahery vaika tany an-toerana, omaly, ka nitarika io fanapahan-kevitry ny tompon’andraikitry ny oniversite Mahajanga hanakatona azy io vonjimaika. Telo andro nanaovana hetsika ireo mpianatra, ary afakomaly nisy ny fifandonana teo amin’ny mpitandro filaminana sy ny mpianatra. Nitohy omaly ny hetsika ka ireo mpianatra indray no nifandona tao anatin’ny faritry ny oniversite. Nahery vaika ny fifandonana tamin’izany satria nisy ny tora-bato sy ny vely kobay nataon’ireo mpianatra. Naratra mafy ny dimy ka voatery naiditra hopitaly tamin’izany. Nisy tamin’ireo ny vaky loha, feno ratra ny tongotra sy ny tanana.
Voatery niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana ka nisambotra ireo mpanao fihetsiketsehana. Nisy dimy lahy voasambotra tamin’izany, ary notanana nanaovana famotorana avy hatrany ireo. Voalaza ihany koa fa nitazona basy ny filohan’ny mpianatra ary nampiasa izany, ka voatery nalan’ny mpitandro filaminana taminy. Hatramin’ny omaly hariva, mbola voatazona tany amin’ny mpitandro filaminana izy dimy lahy ireo, ary mbola any amin’ny hopitaly ihany koa ireo naratra.
Araka ny fanazavana azo, mpianatra avy any Androy sy avy any Atsimo Atsinanana ireo nifandona ireo. Tsy mbola fantatra mazava ny antony nitarika ny adin’ireo mpianatra. Ny olona any an-toerana nanambara fa tsy nitovy hevitra ireo mpianatra ny amin’ny fitokonana sy ny fanapahana ny fianarana. Na izany aza, nisy nilaza ihany koa fa ny fifandonana tamin’ny Emmo/Reg no namparatra ireo mpianatra sasany.
Vokatry ny ady anefa sy ny fanimban-javatra, niafara tamin’ny fikatonan’ny oniversite ihany ny raharaha. Hatramin’ny fotoana tsy voafetra ny fikatonana, raha ny vaovao avy any an-toerana.
Tsy mbola hilamina
Na eo aza ity filazana fa mikatona vonjimaika ity ny oniversite any Mahajanga, milaza fa mbola hanohy ny hetsika ny mpianatra mandra-pivaly ny fitakian’izy ireo. Eo ihany koa ireo namany voasambotra sy maratra. “Mivaly ny fitakiana, mivoaka ny namana vao mijanona ny hetsika. Ts misy mikatona izany eo”, hoy ny vaovao voaray.
Ity hetsika ity izay nitovy ny tany amin’ny oniversiten’i Barikadimy Toamasina. Zavatra iray ihany ny fangatahana ny amin’ny handoavana vatsim-pianarana sy ny momba ny trano fonenan’izy ireo, ary ny saram-pisoratana anarana niakatra. Raharaha izay efa miverimberina hatrany amin’ireo oniversitem-panjakana rehetra. Rehefa tsy manao ny eny Ankatso, manao ny any amin’ny faritra. Tsy misy vahaolana maharitra avy amin’ny tompon’andraikitra mihitsy, ka miafara amin’ny korontana sy ny fanimban-javatra. Andrasana ny tohin’ny raharaha.